Sweet December မှာ KFC ရဲ့ ဘာစားစား 30% Off နဲ့ Chill ကြမယ် | The Restaurant Guides for Myanmar
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပို့ဆောင်ခ လုံးဝပေးစရာ မလိုတော့တ...
Mybanhmi ကနေ အရသာရှိတဲ့ Sandwich တွေကို 20% + 3,00...
15% discount နဲ့ ရှယ်စားရမယ့် FuFu Hotpot ရဲ့ Prom...
DIRECTORY PROMOS & DEALS FOOD & DRINKS RESTAURANTS HOW TO GUIDE NEWS & EVENTS
Sweet December မှာ KFC ရဲ့ ဘာစားစား 30% Off နဲ့ Chill ကြမယ်
ကြက်ကြော်ဟေ့လို့ ဆိုလိုက်ရင် ပြေးမြင်မိတဲ့ ကြက်ကြော် Brand က မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၃) (၄) ခုအပြင် မပိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ဘယ်ကြက်ကြော်ကတော့ အချဉ်ရည်ကောင်းပြီး၊ ဘယ်ကြက်ကြော်ကတော့ အသားပိုများတယ်ဆိုတဲ့ အစားတလိုင်းတွေလည်း ရှိသလို ဒီဆိုင်မှ ဒီဆိုင်ပဲရယ်လို့ Brand တစ်ခုထဲကိုပဲ အမာခံ စားသုံးကြတဲ့ အစားတလိုင်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ The Myanmar Restaurant Guide ကနေ Foodie တို့ အသဲစွဲ ကြက်ကြော်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KFC ရဲ့ Sweet December ပရိုမိုးရှင်းလေး အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ KFC ဆိုရင် ကြွပ်ကြွပ်မွှေးမွှေး ကြက်ကြော်တုံးတွေနဲ့အတူ Lunch Box Set တွေကို ပြေးမြင်မိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
KFC မှာ ကြက်ကြော် အချိုနဲ့ အစပ်အပြင် နောက်ထပ် နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Thai Basil Rice Box နဲ့ Mexican Chipotle Rice Box ပါပဲ။ Thai Basil ကတော့ နာမည်အတိုင်း Thai Taste နဲ့ ဆင်တူပြီး ပင်စိမ်းနံ့ ခပ်သင်းသင်းလေးရယ်၊ ကြက်ကြော်အစပ်လေးရယ်က လုံးဝ Perfect Match ပါပဲ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ထွက်တာ သိပ်မကြာသေးဘူးလို့ ပြောရမယ့် Mexican Chipotle Rice Box ပါ။ ဒီ Rice Box လေးကလည်း KFC ရဲ့ အမာခံ စားသုံးသူတွေကြား အမှာအများဆုံးတွေထဲက ပါဝင်ပြီးတော့ ဒီ Rice Box မှာ Sauce က အသက်ပါပဲနော်။ ထိထိမိမိ ချိုချဉ် Sauce လေးနဲ့ ကြက်ကြော်အစပ်လေးရယ်၊ ထမင်းပူပူလေးရယ် (၃)မျိုး တွဲစပ်လိုက်ရင် မကြွေဆင်းမယ့်သူများ ရှိပါဦးမလားနော်။
Rice Box တွေအပြင် အစာပြေစာ စားလို့ရမယ့် Popcorn Chicken တွေ၊ Onion Rings တွေနဲ့ ကလေးတွေ အကြိုက် Zinger Stacker Burger တွေကလည်း လူကြိုက်များတဲ့ KFC ရဲ့ Menu တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
အခု Sweet December အတွက် KFC ကနေ ပေးနေတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘယ်Menuကို မှာမှာ၊ Foodpanda နဲ့ မှာယူတဲ့ Customer တိုင်းကို ၃၀% Discount ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ KFC ရဲ့ အမာခံတွေကတော့ ဒီသတင်းကို ကြားပြီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလ တစ်လလုံးအတွက် ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Foodpanda ကနေ ဘာ Menu ပဲ မှာမှာ ပရိုမိုးရှင်းထဲ အကြုံးဝင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ Delivery Only ပဲနော်။
ကဲ ဒီတော့ ပရိုမိုးရှင်းကို မသိသေးတဲ့ ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေကိုလည်း လက်တို့ရင်း KFC မှာ ကြက်ကြော်အပြင် နောက်ထပ် ဘယ် Menu ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ဆိုတာကို Comment Box မှာ ပြောသွားပေးဦးနော်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်တွေရဲ့ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
By The Myanmar Restaurant Guide
Read 259 times.
ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဈေးလဲ အသင့်အတင့်ရှိပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင် (၃၂) ဆိုင်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ
ပီကင်းဘဲကင် မူလအစ နန်ကျင်းဘဲကင်
Stay At Home ကာလအတွင်း ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်မည်ဆိုပါက Online မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်
ကြော်ချင်လား ၊ သုတ်ချင်လား ၊ ဒီတိုင်းစားချင်လား ?
ရှယ်စားကောင်းတဲ့ Fried Mozzarella Cheese Stickကို အိမ်မှာ လုပ်စားကြမယ်
Mochi Ice cream လေးတွေက ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်မလဲ
Seafoodတွေကို 50% off နဲ့ ရှယ်ဆွဲကြမယ်လေ
ကိုရီးယား Drama တွေကြည့်တိုင်း သွားရည်ယိုခဲ့ရတဲ့ Rabokkiကို ဘယ်လို လုပ်စားမလဲ။
Bakery & Cake Makers
Tea & Cafe